ပုဂံ အပိုင်းးအစများးးး – Bagan | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » ပုဂံ အပိုင်းးအစများးးး – Bagan	46
ပုဂံ အပိုင်းးအစများးးး – Bagan
Posted by ဇီဇီ on Feb 2, 2015 in My Dear Diary, Photography, Society & Lifestyle, Travel | 46 comments
Bagan Morning (သံတဲဟိုတယ် river view)
5 ဖိုးသိကြား at ဓမ္မရံကြီး
12 လောကနန္ဒာ ဆိပ်ကမ်း
13 ပုဂံ နန်းမြင့်မျှော်စင်
14 နန်းမြင့်မျှော်စင်ပေါ်က ရှုခင်း
15 မျှော်စင်ပေါ်က စုံတွဲ
16 ဆည်းဆာ ၁
17 ဆည်းဆာ ၂
18 သံတဲဟိုတယ်က စုံတွဲ
Mr. MarGa says: ဘာ စာမှ မပါ
ဘာ ရှင်းလင်းချက်မှ မပါ
ပုံချည်းသက်သက် ကြည့်ရအောင်ကလည်း တပုံနဲ့တပုံက ဘယ်လိုချိတ်ကြည့်ရမယ်မသိ
intro လေး ထည့်ပြီး ပုံကို caption လေးတွေ ဖြည့်ပါဦး ဂျီးဒေါ်ငဲ့
ခင်ဇော် says: ဟီိးးးးး
ကွန်ပူတာ က မြန်မာလို ရိုက်မရလို့ ကူညီဘာဦးးးး
Ma Ei says: 14 ကို မျှော်စင်ပေါ်က ရိုက်တာလားဟင်…
အိုက်ပုံ လိုချင်တာ မရောက်ခဲ့လို့ ထပ်သွားရမလို ဖြစ်နေပီ..
ခင်ဇော် says: မွအိ
Firstly, thank you so much for the Diary.
အဲဒီ ပုံမျိုးးးတွေ အများးကြီးး ရလာတယ်။
မျှော်စင်က မရောက်သေးးးရင် သွားးးကြည့်နော်
ခုထိတော့ ဧည့် အရောက် နည်းးးတယ်
Resort မှာ လူစည်ချိန် ဆို များးးလာမယ်ထင်ရဲ့
မေမြို့ ကန်တော်ကြီးးး မျှော်စင်ကတော့ ညစ်ပတ်နေပီ…!!
မြစပဲရိုး says: ချစ်တူမတော် လေး အသံမြင်ရတာ အားရှိလှတယ်။
ဒီအသံလေး ပျောက်နေတာ ရွာထဲ ခြောက်နေရော။
အပိုင်းးအစများးးး ကို ဆက်ပြ နေတော့ တစ်စစီ ကွဲကြေ လာသလား။
ပုံ ၁၄ က ပန်းချီကားလေး အတိုင်းဘဲ။
ပုံ ၁၀ မှာ ဒေါင့် မှာ အလင်းကြောင့် ခေါင်း က နားရွက် လေး နီ နေတာ မိုက် သကွဲ့။
သို့ပေသည့် အဲ့ဒါမပါရင် ပုံ က ပိုပြီး ရှယ် ဘဲ။
ကျုပ် တူမ အတွဲချောင်းပြီး ရိုက်နေတာကိုး။ ဇီးကွက်လေးတွေ ချစ်စရာ။
ဆည်းဆာ က တော့ လွမ်းစရာပေါ့။
ရွာထဲ တစ်ခြား အိမ်တွေ ကို နောက်မှ ဝင်ဗျစီ။
သူကြီး မင်း – လာမယ်။ လာမယ်။ သီချင်းလေး နဲ့ ကို လာဦးမှာ။ lol:-))))))
ခင်ဇော် says: ပြန်ရောက်ပြီ အရီးးရေ
ဟို 11 ကို crop ဦးးးမလို့ပဲ…
အပိုင်းးအစ ဆိုတာ တင်ချင်တဲ့ ပုံတွေ ရွေးးးထုတ်လိုက်တော့ အစဉ်လိုက် ဟုတ်တော့ဘူးးးး
ရိုက်လာတာ အများးးကြီးးး heeeeheeee
ခရီးးးသွားးး ပို့စ် လည်းးး ကောင်းးးကောင်းးး မရေးးးတတ်..!!
Kaung Kin Pyar says: လှလိုက်တာ…ရှုထောင့်မျိုးစုံက ရိုက်ထားတယ်…။ ပုံတွေအားလုံးလိုလိုကြိုက်တယ်…
တစ်ခါပဲရောက်ဖူးတဲ့ ပုဂံကို လွမ်းသွားပြီ….
အစီအစဉ်မကျ ရိုက်ချင်တဲ့ နေရာက ရိုက်ထားလို့ အပိုင်းအစများဖြစ်သွားတာ။
Mike says: .ဘာပြောရမှန်းမသိအောင် ပုံတွေလှတယ်ဗျာ
.ဇီးကွက်စုံတွဲပုံ နဲ့ ခိုမောင်နှံပုံရလာတာ တော်တော်ကံထူးတာပဲ… ဂွတ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ဘုရားဖူးရင် လိပ်ဥတူးလာတာ။
Nyo Win says: အီးးးးး တစ်ခါမှမရောက်ဖူးသေး ဘူးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ကျနော်က ၃ ခါ ရှိပြီ။
Wow says: အဟွာလေ ဘုရားပုံတွေက ဘယ်မာကျိကျိရဒယ်… ဟိုမျှော်စင်ပ်ါကစုံတွဲလေးပဲ ‘မ’ သွားဒယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: နိ ဟာလေ။
နာ့လည်း ဘုရားပုံမရိုက်ပဲ အတွဲချောင်းနေလို့ အပြောခံရတယ်။
pooch says: မရောက်ဖြစ်တာတောင် ကြာသွားပြီ လို့ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
အိမ်စောင့်နတ်နဲ့ မတည့်တဲ့ ပု။
kai says: ပုဂံသွားပြီး..ပုဂံနဲ့ မြန်မာစာမစားခဲ့ဖူးလား.. မသိ…။
ဟင်းခွက် ၃၀၀ ပုံတင်လိုက်မှာနော်။
စားသမျ ဓာတ်သေရိုက်တင်နေလို့ ဖေ့ဘုတ်မှာ အဆဲခံရလို့ ရွာထဲမှာ ငြိမ်နေတာကို တဂျီး လာ စ နေပါတယ် အရပ်ကတို့.။
kai says: CNN မှာ.. Anthony Bourdain: Parts Unknown ဆိုတာရှိတယ်မှလား..
အဲဒါကိုစောင့်ကြည့်တိုင်း…တွေးမိတာက.. ဒေသအခုတိုင်းရဲ့တကယ့်ပုံရိပ်အစစ်က.. အစားအသောက်မှာပေါ်လွင်တယ်… လို့…။
First episode date: April 14, 2013
လက်ခံလို့ ရောက်သမျှ ဒေသတိုင်း စားလာလိုက်တာ၊
ခု အစာအိမ်ယောင်ပြီး သွားနာနေလို့ ဆန်ပြုတ်နဲ့ ၂ ပါးသွားနေရတယ်။
ဟိ။ ပုံတွေ စုပြီး တင်ပြမယ်။
weiwei says: ပုဂံကို​တော့ ဘယ်​​တော့မှမရိုးဘူး။ ဒီပုံ​တွေထဲမှာ​တော့ စုံတွဲ​လေး​တွေ အလှဆုံးပဲ
ဟို ယုန်လေးတွေကို လုပ်ကြံတဲ့သူလောက် မဆိုးပါဘူးနော်။
Shwe Ei says: -လေးငါးဆယ်ပုံလောက် ကော်ပီယူပီး ဝေါပေပါ တင်ပရဇီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: တင်ပါ။
သများ ဖိုတိုလေးရော ယူအူးမလားဟင်?
Shwe Ei says: -လူပုံဆိုရင်တော့..ခြွင်းချက်နဲ့..လက်ခံတယ်ခည..
-ငယ်ငယ် ချောချော ဖြူဖြူဖွေးဖွေး အရပ်ရှည်
-ဗလတောင့်…အမျိုးကောင်းသားလေး ဖစ်ရမီ…အဟိ :P Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12069
အလင်းဆက် says: ကျနော့်လို .ဂိုက်နဲ့ ဆိုဒ်ပေါ့နော်… .အောင်ရဲလင်းတောင်
ကျနော့်လောက် အောင်ရဲ့လင်းနဲ့ မတူဘူးဆိုတော့လေ…
ဂွစ်ဂွစ်.. Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says:4ဓမ္မရံကြီး က သစ်ပင်မှာ ရုပ်သေးရုပ်တွေ ဆွဲထားတာ ရောင်းဖို့လား။
15 မျှော်စင်ပေါ်က စုံတွဲ နဲ့ 18 သံတဲဟိုတယ်က စုံတွဲ ပုံတွေကို သဘောကျတယ်။
ကိုယ့်မှာတော့ ရပ်နေငြိမ်နေတဲ့ အဆောက်အဦတွေ၊ သစ်ပင်တောတောင်တွေကို ရိုက်တာတောင် ပုံကောင်းမထွက်လို့….
သက်ရှိလှုပ်ရှားနေတာကို အမိအရရိုက်လာနိုင်တာကို ချီးကျူးတယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ခင်ဇော် says: ဟုတ် ချစ်မမ
စုံတွဲတွေကလည်း ငြိမ်နေတုန်းမို့ ရိုက်လာနိုင်တာရယ်။
အလင်းဆက် says: .အောက်ဆုံးက ဇုံဒွဲပုံလေးက ခြစ်စယာလေးဗျား…
အဲ့ပုံလေး ကြည့်ပြီး… ကိုယ်နဲ့ ဖွေးဖွေးကို တွဲလျက်သားလေး..မြင်လို့…
(ဘာမှတော့ မဆိုင်ဘူးပေါ့ )
ခင်ဇော် says: လာအားပေးလို့ ကျေးဇူးး
ဖားသက်ပြင်း says: အာ့​တေမြင်​ရ​တော့ ဘာဖစ်​တုန်း
ခင်ဇော် says: ဪအေ။
ယောက်ကျားယူသွားတဲ့ မိန်းမကို တပြီး ငိုနေတဲ့ သူတွေ ဘုရားဖူးမိရင် အပူငြိမ်းလို ငြိမ်းငြား တင်မိတာပါ။
black chaw says: အေး…အေး…
အခုလို မြန်မာပြည် ရောက်တုန်း ရောက် ခိုက်
လူ့ ဘဝ ဆိုတာ တိုတိုလေး တူမကြီးရဲ့ ။
ဆိုတော့ လောဘ ဒေါသ မာန်မာန တွေလျှော့ ကြကွဲ့ ။
သေရင် ကိုယ့်နောက် ပါမယ့်
သီလ ဒါန ဘာဝနာ လေးတွေ ပွားများ အားထုတ်ကြကွယ့်။
မွသဲ ( 17082011 ) says: ၁၅ နဲ့ ၁၆ ကိုအတော်ကြိုက်တယ်။ ကျန်တာတွေလဲကြိုက်တယ်။ ရိုက်ထားတဲ့ရိုက်ချက်တွေကလဲမိုက်တယ်။ Colourful Bagan. လွမ်းတယ် ပုဂံရယ်
ခင်ဇော် says: နောက်ခါ အတူတူသွားရအောင် ယောက်ခမွ
မွသဲ ( 17082011 ) says: နှစ်ယောက်ထဲတွားဂျမယ်
အောင် မိုးသူ says: လှချက် ဘာကင်မရာနဲ့ရိုက်တာတုန်း မကြီး
ခင်ဇော် says: ဖုန်း ကင်မလာနဲ့ရိုက်တာကို ပြင်ထားတာလေ။
Ko chogyi says: နံနက်စောစော အတွဲချောင်းပြီး ဒါ့ပုံရိုက်သတဲ့
အဲဒီ အတွဲက သများကို ချောင်းနေလို့ ပညာပေးလိုက်တာပါ။
kai says: အဲဒီပုံကို… အဲလိုလေးသုံးချင်လို့…
high resolution photo များရှိသလားလို့..။
ခင်ဇော် says: ကျနော် အော်ရီဂျင်နယ် ပုံပို့လိုက်မယ်။
Mr. MarGa says: သိကြားကိုမှ မျက်စိကျရသလား သဂျီးရယ်
nicolus agral says: တူများတို့ကြမန်းလေးမှာထားခဲ့ပီး တူကြလျှောက်လည်နေတယ်
ခင်ဇော် says: တူညားမှာ လျှောက်လည်ချင်လို့မှ ပြန်လာတာကို